Abuur caado kuu gaar ah Debian iso | Laga soo bilaabo Linux
Abuur caado kuu gaar ah Debian iso
Dhisida Debian Live waa degel aan ka abuuri karno gooni u gaar ah Debian (Isku ururi, Wheezy ama Sid) si loo cabbiro, iyo dhowr tallaabo xitaa waan qeexi karnaa taas Deegaanka Desktop waxaan rabnaa inaan isticmaalno.
Haddii aan aqoon leenahay, wax yar oo horumarsan waxaan qeexi karnaa xulashooyinka kale iyo qaababka rakibaadda ee iso. Marka isku soo ururintu dhamaato, waxay kuu soo direysaa URL si aad ugu soo dejiso emayl.Waxaan sugayaa xaqiijintaydu inay timaado, oo waxaan awoodi doonaa inaan kala soo baxo .iso debian-sid + Xfce 😛
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Abuur caado kuu gaar ah Debian iso
Waad ku mahadsantahay macluumaadka, waxaan ka codsaday Sid oo leh Gnome. Fikrad wanaagsan oo ka timi kooxda Debian.
Dhamaan distros waa inay lahaadaan goob sidan oo kale ah. Waxaan weydiistay Debian Imtixaanka LXDE. 🙂
Fikrad fiican, inkasta oo aan wali u malaynayo inaad adigu samaysatid (KISS) waa la sii hagaajin karaa iyada oo aan loo eegin intee in le'eg carc-ka loo yaqaan 'elav carca' illaa sankeyga iyo KISS
HAHAHAHAHA, xagjirnimadaas adigaa iska leh, waxaan la yaabanahay, miyaadan sidoo kale noqon doonin KISS?
Anigu si toos ah uma muuqan karo, dad aad u tiro yar ayaa i habeyn kara
Waa hagaag, waxaan qorayaa faallooyinkan Live DVD Debian Sid ee leh Gnome3 3.2.1 oo leh afar codsi oo furan waxay iga cuntaa 339 MB oo Ram ah, waa dhakhso badan.
Xog weyn, waxaan horey u weydiistay Tijaabada Debian ee XFCE
Ku jawaab antolieztsu
Soo galinta Elav waa la mahadiyey.
Hal shaki uun baa iga jira, dhammaan qeybaha waa ii cadahay
marka laga reebo qaybta cgipackages.list.chroot.
Waxaan baaray internetka laakiin ma cadda waxa aan ku darayo
ka hor, mahadsanid.
Haddaan kuu sheego run baan kuu sheegayaa. Waxaan uga tagay wax walba asal ahaan, laakiin way fiicnaan laheyd inaan ogaado waxa ikhtiyaarkaasi yahay.
Sida muuqata (wixii aan ka arki karo koodhka) waa qayb saddexaad oo liis garayn aan rasmi ahayn.
Hada waxa kaliya ee aan ka fikiri karo ayaa ah qeybtaas waa inaad gashaa xirmooyinka * .deb ee aan rabno inaan ku rakibno. Laakiin fiiro gaar ah ha i siin aniga, halkii ay tahay mala-awaal ilaa aan ka nadiifinno shakigan yar. Haatan waxaan u dhigay sidan, waxaan arki doonaa natiijada hahaha ... qarsoodi, laakiin taa bedelkeeda waa tijaabo.
–Tasks: isbaanish spanish-desktop spanish-gnome-destkop ssh-server web-server faylka-server
Fursadaha bootstrap ee horumarsan
–Qaab dhismeedka: i386
Ikhtiyaarrada jrootka ee horumarsan
–Chroot-fileystem: squashfs (Iskuxirka)
Fursadaha ikhtiyaariga ah ee horumarsan
–Bootappend-live: locales = es_ES keyboard-layouts = es
–Bootappend-rakib: locale = es_ES.UTF-8 keyb = es
–Hal-codsi: Debian Live
–I-Diyaariye: nolol-dhis; http://packages.qa.debian.org/live-build
–I--daabacaha: Debian Live project; http://live.debian.net/; debian-live@lists.debian.org
–Iso-mug: Debian Live 20120106-04: 59
–Net-path: / srv / debian-nool
Ikhtiyaarrada ilaha sare
War aad u fiican, waxaa laga yaabaa inaan mar uun isku dayo.
Waxay u egtahay mid aad u xiiso badan, waa inaan hubiyaa, ma ogi inaad isku dayday Suse Studio, waxay umuuqataa xoogaa dhameystiran, salaan.
Kheyraadka sifiican ayuu u shaqeeyaa. Waxaan horey uhelay Live-Cd-kayga oo leh xfce tijaabinta debian-ka. Beddel wanaagsan oo ay tahay in lagu qoro bogga rasmiga ah (debian.org).
Haddii mid idinka mid ah uu leeyahay dhibaatooyin sir ah (haa, debian live cd wuxuu la yimaadaa erayga sirta ah o_O), waa: user - live (isticmaale caadi ah), nool - nool (xidid). Marka iyagu isma dilaan iyagoo baaraya shabakadda. Nabad gelyo
Waxaan codsaday 2 iso mana fahmin sida loo soo dejiyo xiriirku wuu muuqdaa ... oo kaliya hal nooc oo qoryo ah ayaa ka muuqda bogga ... laakiin waxba
Waxaad qaadan kartaa shaashad sawir ah oo aad nooga tagto sawirka halkan (ama ku xirnoow), si aan u aragno waxa kuu muuqda 🙂
kani waa waxa ii muuqda ... midkoodna xiriidhada looguma talagalin soo dejintooda ... kaliya waa diiwaanada geedi socodka isku dubaridka (waxaan u maleynayaa)
Lagu soo galiyay UploadImagenes.com
Mana jiraan tilmaamo ku jira waxyaabaha ku jira faylashaas?
waxay la mid yihiin alwaaxyada kadib abuurista sawirka ...
tilmaamo ma laha gudaha
Wax badan kama aqaan gnu / Linux. markaa waa in xulashooyinka dheeriga ah ee bogga maadaama aan in yar u xiisay. hehehehe
illaa iyo hadda waxaan dareemayaa raaxo ku rakibaadda ugu yar oo aan ku rakibo shebekadda netka ka dibna
codso aptitude rakib xorg-xserver-video-intel gdm3 ka dibna marmar internet iyo codsi multimedia ah 😛
Fadlan, aad u xiiso badan laakiin u dhig cashar barashada Isbaanishka kuwa annaga oo aan aqoon badan u lahayn mawduuca laakiin waxaan ku jirnaa adduunka cajiibka ah ee softiweerka bilaashka ah, tusaale ahaan waxaan apollo 10000% u dirayaa LX deegaanka LIGHT PORSER LIGHT I LIKE It IS BEAUTIFUL IYO KHARASHAD AAD U YAR OO DHAMMAAN dhammaan deegannada desktop-ka waa inay ku shaqeeyaan urta processor-ka iyo xusuusta RAN
Ku jawaab Korea